कलियुगका कुरा: आफ्नै कृति सेकेन्ड ह्यान्डमा
Kamal Nepal, Sunita Giri, Keshav Koirala 'Alles Nichtsnutz' and 10 others like this.
Dipesh Thapa ha ha ha
Roshan Dahal आफ्नै कृति किनेर कोखिलामा हालेछन्.....??????????????
Nira Ranabhat पत्रकार/रिपोर्टरहरु पनि धेरै नै ब्यस्त हुन थाले । लेख्नु पर्ने कुरा नै लेखिदिदैनन र पो त फसाद पर्छ कहिलेकाहिँ । फेरी जहिले पनि अरुका कुरा मात्र लेख्ने पत्रकारको आफ्नो पिडा भने लेखिदिने कोही हुँदैन भन्ने गुनासो बेला-बेला पत्रकार हरुले गर्ने गर्छन । हाम्रा कुरा चाही कोही नलेखिदिने, अनि हामी मात्रै तीनको कुरा लेखेर बस्ने हो कि क्या हो ? भन्ने लाग्न सक्छ नि कहिलेकाही । कहिले के कहिले के कारणले लेख्नु पर्ने समाचार/खबर लेखिएको हुँदैन। तर त्यसो हुन नहुने ........।
Realit Bites कोखिला ~समिक्षा~तर त्यसो हुन नहुने ........।
Jaw Knock Raazaa यस्तै हो आजकाल का पत्रकारले पत्रकारिता भन्दा नि अरुलाई अलपत्र पार्ने धन्दा बढी गर्छन् । के भन्नु म आँफै पीडित । यस्तै हो । कहिले हो उहिले ब्याचलर पढ्दा पत्रकारिता को तरिका अर्थोकै लेख्या जस्तो लाथ्यो किपाताँ । आजकाल फेरिएछ क्यारे । किपात नहेर्या धेरै भो । :))
Deepkiran Sharma Bichara hami Sahitya lekhne haru !!!